Dreams Khabar कोलेस्टेरोल भनेको के हो ? कसरी बढ्छ ? खराब कोलेस्टेरोल घटाउने ६ खाना यी हुन्
कोलेस्टेरोल भनेको के हो ? कसरी बढ्छ ? खराब कोलेस्टेरोल घटाउने ६ खाना यी हुन्
ग्रीन टीमा हुने एन्टिअक्सिडेन्ट तत्व कोलेस्टेरोल घटाउन उपयोगी हुन्छ। अमेरिकन डाइटेटिक एशोसियनको जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धानअनुसार ग्रीन टी नियमित रुपमा सेवन गर्ने मानिसको शरीरमा कोलेस्टेरोलको स्तर निकै कम रहेको पाइएको छ। ग्रीन टीले ५ देखि ६ अंकसम्म कोलेस्टेरोलको कूल मात्रा र एलडीएल स्तर कम गर्न सहयोग गर्छ ।एजेन्सी